Zhizha 2016, tsvaga iwo mahombekombe akanyarara muPortugal | Kufamba Nhau
Mariela Carril | | Beaches, Putugaro
Zhizha riri kuuya uye hazvigoneke kusafunga nezve zvatichaita, kwatichaenda, kana tichida makomo, gungwa kana guta senzvimbo yekuenda kuzororo. Spain iri padyo nePortugal, saka Mapurisa ePortugal anogara ari muyedzo mukuru.
Portugal ine mahombekombe mazhinji akanaka uye mamwe anonyatso kufarirwa, asi havazi ivo voga. Kana iwe uchida kutiza vanhu, mitengo inodhura uye mhomho uye iwe urikungotsvaga nzvimbo pagungwa yekuzorodza muviri wako pamwe nemweya, heino mamwe emahombekombe akadzikama uye akanaka kwazvo muPortugal. Endai munovawana zhizha rino 2016.
Ichokwadi icho imwe yenzvimbo dzakanakisa dzemahombekombe muPortugal ndeye Algarve. Inotarisa huwandu hukuru hwemabhichi anozivikanwa asi panogara paine nzvimbo ye Mataundi egungwa haana kushanyirwa zvakanyanya, ari kure zvakanyanya, nemitengo yakajairika yehomwe dzedu dzekusingaperi kwehupfumi hupfumi. Uye chinhu chakanakisa ndechekuti havana vanhu vakawandisa vakaturikidzana, vachiita ruzha, vachikanganisa runyararo rwezuva rako rwakakodzera.
Iyi nzvimbo iri kuchamhembe kweimwe bhishi iyo yatichakurudzira, Sagres. Inozorora kumahombekombe ekumadokero kweAlgarve. UyeIri igungwa kuAtlantic iri reguta diki reCarrapateira, padivi pegomo, ingori kiromita kubva kumahombekombe
Kunyangwe iri diki, inogamuchira vashanyi uye inopa dzimba diki dzevaeni uye makamuri akazvimirira kuti varidzi varo vabhadhare mari yerendi. Iro guta rine mabichi maviri, zvese nejecha rakanaka uye rakanaka uye nemamiriro akanaka ekusefa. Kutaura zvazviri mune chimwe chazvo chikoro chidiki chesefa chinoshanda saka vazhinji vanouya kunyanya kudzidzisa kana kudzidza. Uye kana iwe uchida nhoroondo, iwe unogona kugara uchienda parwendo kuenda kune yekare nhare yakavakirwa kuti uzvidzivirire kubva kuvapambi muzana ramakore rechiXNUMX.
Iyi ndiyo imwe yenzvimbo dzinozivikanwa kwazvo pakati penzvimbo dzakanyarara dzatiri kuongorora nhasi. Ndiyo masipala weVila do Bispo zita rake rinobva ku Chitsvene Zvinotaridza kuti chiKristudhomu chisati chatanga, marudzi akasiyana ainamata vamwari vavo kubva pano Nechekare munhoroondo yepedyo Sagres ane hukama zvakanyanya nerwendo rwegungwa rwePortugal uye akatomborwiswa nemukurumbira wechiRungu Francis Drake.
Asi nhasi tinofanirwa kutaura kwete nezvenhoroondo yayo asi pamusoro pemahombekombe ayo. Unogona kuwana nhoroondo yayo kana ukafunga kushanyira guta riri mumahombekombe. Iine mahombekombe mana chikuru icho chinopfuura kugadzirisa kuti guta racho ringave risinganakidze sei pakutanga kuona. Zviri kukuru kuenda kumhuri vanoda zororo nemari shoma, surfers kana backpackers. Iwo mahombekombe ari Praia de Belixe, pazasi pemawere uye ane maonero akanaka, Praia do Martinhal, inova gumi mapoinzi ekumisa mhepo, Praia do Tonel yakanangana nekusevha. uye pakupedzisira Praia de Mareta ndiyo yakanakisa kana iwe usiri kuda kuve mushanyi anoshingairira uye chinhu chako kungorara muzuva uye kunakidzwa nekugeza nguva nenguva.
Iri iguta rakavambwa mukupera kwezana ramakore regumi nesere uye vagari varo vekutanga vakasungwa avo vaifanira kusangana nekurwiswa kwakawanda kwepirate kudzamara kuvakwa kwenhare kwaisa cheki pane kupambwa kwematsotsi. Zorora pamhenderekedzo yeAtlantic, kumadokero kwemahombekombe eAlentejo, pakati pakati peLisbon neAlgarve, uye iye ane rakanaka uye rakapamhamara chikepe chiri cheRwizi Mira.
Chakakomberedza pane mahombekombe mazhinji uye dzimwe, dzepedyo, dzimwe nzira dzakanaka dzevashanyi. Ivo havasi sooo vanozivikanwa nevashanyi vekunze saka kune vakawanda veko. Furnas, Aivados, Ribeira da Azanha, Praia da Franquia neMalhao ndivo akanakisa. Mahombekombe ari padyo nechikepe Ivo vanobva kumvura yakadzikama uye inodziya uye ndosaka ivo vari nzvimbo dzinozivikanwa. Mhenderekedzo yakanaka sezvo iri yeCosta Vincentina de Aletejano National Park, saka hakugone kuve nenzvimbo hombe dzekugara. Izvo zvakanaka!
Alentejo iguta rakanyarara, chiPutukezi muzhizha, chine vashanyi vekunze, uye Vila Nova de Milfontes yakagadzirirwa ivo saka hapana munhu anokuuraya nemitengo. Mwaka wayo wevashanyi wakakamurwa kuita zvikamu zviviriKune maPutukezi mazororo ezhizha (kubva kupera kwaKurume kusvika kupera kwaNyamavhuvhu), mazororo mapfupi asi akasimba uko kune vanhu vazhinji kwese kwese, uye mwaka wakaderera uko kuri kushanda maProtocol.
Kunze kwezororo muPortugal Vila Nova de Milfontes inzvimbo yakasununguka, dzikama. Ramba uchifunga mupfungwa yako chinhu chekutanga kuti ugadzire pamberi, hongu. Mamiriro ekunze akanakisa anotanga pakati paMay uye anogara kusvika kupera kwaGunyana. Chitubu chinotonhorera uye matsutso anotonhorera zvakare, asi kana iwe usiri kuda kugara pamhenderekedzo yegungwa uye kuongorora nzvimbo, idzi inguva dzakanaka dzekuita saizvozvo: kuchovha bhasikoro, kukwira, kufamba kumawere. Gungwa rinogara richitonhora, hongu, mushure mezvose iAtlantic.
Chii chatinokurudzira iwe kuti uone muVila Nova de Milfontes? Iyo Fort Sao Clemente iyo inorinda mukova weMira de pirates estuary, yava kushandurwa kuita hotera, iyo mwenje wechiedza padombo, pamuromo pechikepe chimwe chete, unogona kubatana nacho nechiteshi ichi mukufamba kunofadza kwemahombekombe, iyo Chechi yeMukadzi Wedu Wenyasha, XNUMXth century kunyangwe yakadzoreredzwa muna 1959 uyezve emahombekombe ese. Uye usakanganwa kuyedza gastronomy yemuno!
Kunyangwe iri risiri guta riri pamhenderekedzo yegungwa asi pamhenderekedzo yerwizi, rwizi Gilao, inzvimbo yakakosha nekuti unotora chikepe chemaminetsi gumi chete uye uri mune yakanaka Ilha de Tavira, nzvimbo ine makiromita gumi nemana emahombekombe.
Tavira ane nhoroondo dzekare, kubva kuBronze Age uye maFenikiya, maRoma nemaMoori apfuura. Iri iguta rinokwezva kwazvo, rine mahotera, mabhawa, maresitorendi uye maresitoreti, bhiriji rakakurumbira kwazvo rehorodhi uye zvivakwa zvezvakaitika. Chii ingori makiromita makumi maviri kubva kumuganhu neSpain zvinobatsira. Kune mahombekombe, iwe unofanirwa kuyambukira kuchitsuwa asi miriwo inowanzoitika.
Iwe unotozviziva ipapo, kana iwe uri kufunga nezvePortugal muzororo rino rezhizha iwe unogona kusarudza zvishoma zvinozivikanwa, zvisinganyanyozivikanwa, nzvimbo dzisingadhuri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Getaways Europe » Putugaro » Zhizha 2016, tsvaga iwo mahombekombe akanyarara muPortugal
Mhenderekedzo dzakanakisa muCentral America
Makumi nematatu mafomu anoshanda ekufamba nevana